Sina Pets orinasa mpamokatra ahitra sy mpamokatra | Jiayi
Marika TURF INTL hahavony 35mm
Row Spacing 3/8 santimetatra kilasy Kilasy iraisam-pirenena
Filament Twist number 12000dtex fotoana ho an'ny Landscaping, ho an'ny Recreation, ho an'ny Sport, Golf mametraka Green
Kofehy kofehy Monofilament Form an'ny kofehy Hetezo mahitsy
Halavan'ny kofehy Fohy Cross Profile Spine Shape
Votoatin'ny antontam-bato 12000dtex Votoatin'ny volo UV fanoherana PP kofehy kofehy
Ny halavan'ny kofehy 35mm Fametahana milina 3/8 santimetatra
Stitch / M2 160 Tufts / Sqm 16800 Density
hanampy Lamba 2PP + Lakaoly PU Size 2m * 25m & 4m * 25m
famaritana 4m * 25m na 2m * 25m, namboarina Kitapo fitaterana Lamba plastika isaky ny fonosana, fonosana amin'ny horonana
Kaody HS 5703300000 niaviany Shina
Na inona na inona toetr'andro any ivelany, ny ahitra sandoka an'ny Turf Intl dia afaka miaro ny biby fiompinao tsy ho vovoka sy loto.
Tsy misy claws feno fotaka midika hoe tsy misy fotaka ao an-trano. Tsy mihady intsony ao an-tokontany, vovoka na aiza na aiza. Ary mampihena be ihany koa ny faktioran-drano sy ny vidin'ny fikolokoloana avo.
Manome tontolo azo antoka sy milamina ary toerana malalaka ahafahan'ny biby fiompinao milalao sy manao spaoro.
Ny bozaka Turf Intl no ahitra ankafizin'ny alikao. Raha efa zatra ny fahatsapana voajanahary amin'ny ahitra voajanahary ny biby fiompinao, dia ho safidy tsara kokoa ho anao ny turf artifisialy, izay tena misy ny fientanam-po amin'ny fijerin'ny maso sy ny fahalalam-pomba. Tsy ho hitan'ny bibinao mihitsy ny fahasamihafana misy eo amin'izy ireo. Mandritra izany fotoana izany, ny ahitra artifisialy dia voatenona amin'ny vovon-tany vita amin'ny plastika. Ireo lavaka kely amin'ny vovo-tany dia afaka miantoka ny famoahana ny urine sy rano. Raha efa zatra ny ahitra voajanahary ny alikao mpiompinao, izay manjavona tsikelikely isan'andro, dia tsy mila miahiahy ianao sao hamiravira ny ahitra ny alikanao na ny maloto na ny fofony dia handoto ny ahitrao. Ahitra mafy tokoa ny bozaka artifisialy, izay ahafahana manondraka mora foana ny ranon'ireo biby fiompy, toy ny urine, sy ny tain'ireo biby fiompy, ary ny urin dia tsy havela hiteraka bakteria ary hiteraka aretina. Mora diovina sy tazonina ihany koa ny bozaka artifisialy. Ny tena zava-dehibe dia ny tsy ahitan-doza ireo ahitra artifisialy. Tsy mila miahiahy momba ny tasy maloto na ny pirinty ianao, ary tsy mila manadio ho an'ny alik'elinao alohan'ny hiverenany ao an-trano intsony.
Hanana trano milamina sy milamina ianao isan'andro. Mandrakizay dia tsy mila miahiahy momba ny alika biby fiompinao ianao hilalao amin'ny bozaka izay tratry ny masoandro mirehitra, miforitra, maloto ary zezika na manapaka ny ahitra. Tsy mila matahotra koa ianao sao hanimba ny bozaka ny alikanao.
Density / m2 16800/21000
1. Mitsitsia fotoana, manangona vola tsy manondraka, tsy manapaka.
2. Tsy ilaina ny fanesorana ahi-dratsy, ary avotra ny vidin'ny asa
3. Mamorona faritra fialam-boly ahazoana aina amin'ny vidiny 0 sy ny asa 0.
4. Sariaka tontolo iainana mihodina 100%
5. Rehefa miditra anaty torimaso ny ahitra voajanahary dia mbola afaka mitondra anao ny fahatsapana lohataona ihany ny ahitra artifisialy.
6. Toa tsy dia mitovy amin'ny ahitra tena izy fa mahatsapa malefaka kokoa noho ny ahitra tena izy.
7. Afaka milalao am-pifaliana eo amin'ny bozaka tsy misy fandroana fotaka ny ankizy. Mety ho an'ny alika sy biby hafa satria mora ny manadio sy mitantana azy.
8. Fametrahana sy fikojakojana mora, fitsinjovana ny vidin'ny fametrahana sy fikojakojana.
9. Tsy mila fikojakojana ny bozaka.
1.0 Ny fitaovana rehetra amin'ny peratra dia mahafeno ny fepetra takian'ny fiarovana ny tontolo iainana; Azo ampiasaina indray ny volon'ahitra artifisialy.
Teo aloha: Ahitra artifisialy
Manaraka: Toerana filalaovana ahitra ahitra
© Copyright - 2010-2021: Voatahiry ny Zo rehetra. Vokatra asongadina, Sitemap, Turf artifisialy volondavenona, Turf artifisialy fanatanjahan-tena, Flooring Gym vita amin'ny fingotra matevina, Synthetic Turf Pros, Sehatra ara-panatanjahantena Turf artifisialy, Baseball Field Grass, Vokatra rehetra